ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး မတွေ့ရှိသေးတဲ့ နိုင်ငံ (၅၀)ကို လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါ - Shweman
ပိုးမတွေ့သေးတဲ့နိုင်ငံတွေကို ရှာကြည့်တော့ အံမယ် ၅၀ တိတိကျန်သေးသဗျ။ သတင်းအများစုက ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုပဲတွက်သမို့ ၃၂ နိုင်ငံပဲကျန်သလို ဖြစ်နေတာထင်ရဲ့။ နိုင်ငံအမည်တွေမြင်‌တော့ ပထဝီညံ့တဲ့ကျတော်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပထဝီစစ်ကြည့်မိတယ်။
စစ်ချက်က ဒီလိုထွက်သဗျ။ ကိုယ်နာမည်မကြားဖူးတဲ့နိုင်ငံ ၂၀ တိတိပါသဗျ။ ကိုယ်တွေကလဲ ပထဝီ ညံ့လိုက်တာ။ နံပါတ်3နဲ့4က ကြားဖူးသလိုလိုရှိ‌ပေမယ့် ဘယ်နားမှာလဲမေးရင် မသိဘူးရယ်။
1. Chad 2. Burundi 3. Tajikistan 4. Kyrgyzstan 5. Eritrea 6. Botswana 7. Lesotho 8. Guinea-Bissau 9. Djibouti 10. Comoros 11. Cabo Verde 12. Belize 13. Vanuatu 14. Sao Tome & Principe 15. Kiribati 16. Grenada 17. Saint Kitts & Nevis 18. Palau 19. Tuvalu 20 Nauru
နောက်ဆို ရွာမှာချည်း နေလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါတွေပြီးရင် သူများတွေလို နိုင်ဂံခြားလေး ရောက်ဖူးအောင် သွားဦးမှပါ‌လေ။
နာမည်ကြားဖူးတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလည်း တကယ်တမ်းက သိပ်သိလှတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါနဲ့ ရှာကြည့်တော့ ဒီလိုတွေ့သဗျ။ ဒီအုပ်စုထဲမှာ မြန်မာထက် စီးပွားရေး Ranking မြင့်တာဆိုလို့ Angola (57) ပဲပါသဗျ။ Angola က တရုတ်နဲ့တောင် ကုန်သွယ်ရေးပိုငွေ ၂၁ ဘီလီယံ ဒေါ်လာပြတဲ့နိုင်ငံဗျ‌နော်။ ကျန်တာတွေကတော့ ကိုယ်တွေထက်မွဲတာတွေချည်းပဲဗျ။
ပိုးမတွေ့တဲ့နိုင်ငံတွေကြည့်လိုက်တော့ မွဲနေရင် ပိုးကတောင် အဖက်မလုပ်ဖူးဆိုတာ တွေ့ရသဗျ။
1. Myanmar (Economy Ranking 71) 2. Uganda (Economy Ranking 101) 3. Angola (Economy Ranking 57) 4. Mozambique (Economy Ranking 126) 5. Yemen (Economy Ranking 98) 6. Madagascar (Economy Ranking 133) 7. North Korea (Economy Ranking ?) 8. Mali (Economy Ranking 117)) 9. Malawi (Economy Ranking 146) 10. Zambia (Economy Ranking 102) 11. Syria (Economy Ranking ?) 12. Zimbabwe (Economy Ranking 110) 13. Haiti (Economy Ranking 141) 14. Papua New Guinea (Economy Ranking 112) 15. Sierra Leone (Economy Ranking 155)
16. Laos (Economy Ranking 116) 17. Libya (Economy Ranking 91) 18. Nicaragua (Economy Ranking 112) 19. El Salvador (Economy Ranking 104) 20 .Turkmenistan (Economy Ranking 92) 21. Gambia (Economy Ranking 173) 22. Timor-Leste (Economy Ranking 161) 23. Mauritius (Economy Ranking 123) 24. Fiji (Economy Ranking 148) 25. Solomon Islands (Economy Ranking 175) 26. Montenegro (Economy Ranking 151) 27. Samoa (Economy Ranking 180) 28. Micronesia (Economy Ranking ?) 29. Tonga (Economy Ranking 184) 30. Marshall Islands (Economy Ranking 187)
ပိုးတွေ့၊ မတွေ့က တရုတ်ခရီးသည်လာမလာနဲ့လည်း ဆိုင်ပုံ မရဘူးဗျ။ ၂၀၁၈ ကိန်းဂဏန်းအရ တစ်နှစ်ကို တရုတ် ၆၀၀‌ ကျော်ပဲလာတဲ့ ပါရာဂွေးမှာ ပိုးတွေ့လူနာ ၉ ယောက်ရှိပြီး၊ တရုတ်နဲ့ကပ်ရက်ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ကို တရုတ်ပြည်က လူ ၉ သိန်းကျော်လာတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ပိုးမတွေ့တာ ဝမ်းသာလို့မဆုံးပါဘူး။
ကျတော်ကတော့ အဓိကကျေးဇူးတင်ရမှာ လဝကဝန်ထမ်း‌တွေလို့ ထင်တာပါပဲ။ နေရပ် -“ဝူဟန်”၊ အလုပ်အကိုင် – “ဗိုင်းရပ်” ဆိုတာနဲ့ လဝကက visa ဘယ်ပေးပါ‌တော့မလဲ။ ပိုးကလဲ international ပိုးပဲ‌လေ၊ visa မပါရင် မဝင်ရဘူးဆိုတာ သိပ်သိတာပေါ့။